ကျွန်တော့်အဖေ(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော့်အဖေ(၁)
Posted by Uncle Myo on May 29, 2012 in Creative Writing | 39 comments
အဖေဆိုတာထက် ဖေဖေ ကို ခေါ်ရတာပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဖေဖေ လို့ပဲ တစ်သက်လုံးခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ခေါ်စရာ မရှိတော့ပါ။ လုံးဝ (လုံးဝ) ကို ဆုံးရှုံးသွားပါပြီ။
လယ်သမားမျိုးရိုး၊ သူကြီးမျိုးရိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံနဲ့ အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့လို့ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်) ရခဲ့ပါတယ်။ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး (ငှက်ပျောခြောက်) တစ်ပုဒ်ကို မြန်မာ့အသံမှ ဖတ်ကြား အသံလွှင့်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် 1958 ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက အသဲကြားက မဲတစ်ပြားဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် သတင်းစာမှာရေးဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာ။
အဟိ ဆိုတဲ့ ဟာသစာစောင်မှာလည်း ဟာသ၀တ္ထုတွေ ရေးပါတယ်။ သော်တာဆွေတို့ သန်းဆွေတို့ နဲ့လည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ ပါပဲ။
ခေတ်သစ်စာ သတင်းစာမှာလည်း မြေဇာပင်ဆိုတဲ့ အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်တစ်ပုဒ်ရေးဖူးတယ်။
အလုပ်တော့တော်တော် စုံစုံ လုပ်ဖူးတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကို နောက်မ ကြုံရင် ကြုံ သလို မှတ်မှတ်ရရ ရေးပြပါဦးမယ်။
လက္ခဏာဗေဒင်လည်း ကြည့်တယ်ဗျာ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူ ကုန်သလောက်ပဲ။ သေတဲ့ အထိမှန်တဲ့သူတွေလည်း မှန်သွားတယ်။ (သူ့ဆီကပညာအမွေ နည်းနည်းရလိုက်တယ်။ မေးချင်ရင် လက်ဖ၀ါးပုံစံသာတင်ပေးလိုက်ပါ။ သိတာကိုဟောပြမယ်။ မသိတာတော့လုံးဝမဟောပါ။ မေးချင်ရာမမေးနိုင်ပါ။)
မြ၀တီဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၊ ပေးဖူးလွှာဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ၊ ဓါတ်ပုံပညာသည်ကြီးများလက်စွမ်းပြ ကဏ္ဍတွေမှာ သူ့ပုံတွေ ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
မြ၀တီကချီးမြှင့်တဲ့ ဂုဏ်ထူဆောင်ဆုလက်မှတ်နဲ့ ငွေဖလား ခုထိအိမ်မှာရှိပါသေးတယ်။ ခန့်ခန့်ကြီး ( ဒေါ်ပတ္တမြားခင်) တို့နဲ့ တစ်နှစ်တည်းပါ။ သူတို့ကတော့ ဖလားကြီးကြီးပေါ့ဗျာ။ ဆုယူနေတဲ့ပုံလည်း မြ၀တီမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါပါတယ်။
ဓါတ်ပုံဆု ရခဲ့ပေမယ့်လည်း မျိုးရိုးမရှိခဲ့ပါ။ ရက်ရှည်လများ သင်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ (၇ ရက်ခန့်)၊
ကျွန်တော့် အဖေ အကြောင်း ကောက်ကြောင်းလေးရေးပြတာ နည်းနည်းရှည်သွားပြီထင်တယ်။ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ဆိုရင် ဆက်ရေးပြချင်ပါတယ်။
ရွာသားအားလုံးကိုခင်ပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ စရိုက်အသီးသီးတော့ ရှိကြတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ခင်မင်ကြပါ။ ကျွန်တော် ဒီရွာမှာ အခြေချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အကြောင်းဆိုပေမဲ့ ရေးတတ်တော့လဲ စိတ်ဝင်စားဘို့ကောင်းပါတယ်
ကျွဲကူး ရေပါဆိုသလို အဖေ နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ခေတ်စနစ်အကြောင်းတွေ နဲ့ တခြား ဗဟုသုတတွေလဲ သိနိုင်တာပေါ့
ဦးမျိုး အဖေက ” တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့လို့ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် (ဒုတိယဆင့်) ရခဲ့ပါတယ်” ဆိုလို့ မနေ့က ဖတ်မိတာလေး တစ်ခု ပြောပြချင်တယ်
အရင်က သတင်းစာထဲ ပါတယ် မော်ကွန်းဝင် ပထမအဆင့်တို့ ဒုတိယအဆင့်တို့ ဖတ်ရတယ် ဘယ်သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် ရတယ် ဆိုတာ မသိဘူး မနေ့က ဆရာတင်နိုင်တိုး ရဲ့ ဆောင်းပါးလေးမှာ ရေးထားတာ ဖတ်မိမှ သိလိုက်ရတယ်
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး အရေးတော်ပုံမှာ ပါတဲ့သူတွေကို မော်ကွန်းဝင်တံဆိပ်တွေ ချီးမြှင့်တယ်
ပထမခေတ် – ၈-၁-၁၉၄၂ ကနေ ၂၆-၇-၁၉၄၂ အထိ
ဒုတိယခေတ် – ၂၇-၇-၁၉၄၂ ကနေ ၂၆-၃-၁၉၄၅ အထိ
တတိယခေတ် – ၂၇-၃-၁၉၄၅ ကနေ ၁၅-၈-၁၉၄၅ အထိ
သုံးခေတ်လုံး ပါတဲ့သူကို မော်ကွန်းဝင် ပထမအဆင့်
နှစ်ခေတ်ပါတဲ့ သူကို မော်ကွန်းဝင် ဒုတိယအဆင့်
တစ်ခါပဲပါတဲ့သူကို မော်ကွန်းဝင် တတိယအဆင့်
( ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ မှားရိုက်ထားတာလားမသိဘူး သုံးခေတ်ပါသူကို မော်ကွန်းဝင် တတိယအဆင့်လို့ ရေးထားတယ်)
ကျွန်တော်လဲ အခုမှ သိရတယ် ၊ ဒီပို့စ် ကို ဖတ်မိပြီး မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ ပြန်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ
နောက် ပို့စ်တွေလဲ မျှော်နေပါ့မယ်
ကိုnozomiရေ “”မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး အရေးတော်ပုံမှာ ပါတဲ့သူတွေကို
မော်ကွန်းဝင်တံဆိပ်တွေ ချီးမြှင့်တယ်ခေတ်သုံးခေတ် ခွဲလိုက်တယ်
သုံးခေတ်လုံး ပါတဲ့သူကို မော်ကွန်းဝင် ပထမအဆင့်
နှစ်ခေတ်ပါတဲ့ သူကို မော်ကွန်းဝင် ဒုတိယအဆင့်
တစ်ခါပဲပါတဲ့သူကို မော်ကွန်းဝင် တတိယအဆင့်
( ဆောင်းပါးထဲမှာတော့ မှားရိုက်ထားတာလားမသိဘူး သုံးခေတ်ပါသူကို
မော်ကွန်းဝင် တတိယအဆင့်လို့ ရေးထားတယ်)””ဒါလေးက လဲပြန်မှတ်ထား
စရာမို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ဦးမျိုးရေ ကျွန်တော့်အဖေ(၂)(၃)(၄)—-မျှော်နေမယ်
ဦးမျိုးလဲ အဖေတူသား ဒါမှမဟုတ် အဖေ့ထက် ထက်တဲ့သား နေမပေါ့နော..
အခုကျ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်နေရတာလဲ
ဒီကိစ္စ မဖြစ်သင့်ဘူး ရွာက ကာလသားတွေစုပြီး ဆန်ဒပြကြပါ
12 နာရီကနေ လေးနာရီခွဲ မီးပျက်တဲ့အချိန်လေးမှာ အဘတ်ခံလိုက်ရဒယ်..
အူးပေပဲနေမှာ..အူးပေ အဲဒီအချိန်မှ ၀င်လာဒါ :D
အောက်က ကိုရင်တော့ ကားသူဋ္ဌေး အန်ကယ်မျိုးကိုချုပ်ပြီး ကားပါမစ်ရအောင် မန်းနေတယ်ထင်ပါ့
ရွာထဲ စတားကိုလာ ကြေငြာဝင်ထားလို့ ပူတူးတူး နေရတဲ့အထဲ ။
““ အရက်ဖိုး ”” မရှိလို့ ၊ ဘယ် ရွာသူား တစ်ယောက်ယောက် ဆီမှာ ကြယ်တစ်ပွင့်ပေါင်ခဲ့မှန်း မသိ ။
နက်ဖြန်လကုန်ပြီ ….. လာမရွေးရင်တော့အဆုံးပဲနော်………
အန်ကယ်မျိုးရေ.. ရွာမှ အခြေချမယ်ဆိုရင် အားပေးဖို့
အသင့်ပါဗျာ.. အိမ်ပါဆောက်ပြီး နှစ်နဲ့ချီနေမယ်ဆိုလည်း
ကျနော်တို့က သစ်ဝါး ကူညီဖို့ အသင့်ပါ။
ဒီရွာက ဒီမိုသဂျီးကတော့ လယ်ယာတွေကို
ဇေကပ်ဖားကို သီးစားနဲ့ ချထားလိုက်ပြီ ကြားပါတယ်..
အူးဗိုက်နဲ့ ကျနော်နဲ့ ဘီအီးပုလင်းမှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး
ကျွန်တော်သိသလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘယ်ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တော်လှန်ရေးဆောင်ရွက်ချက်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တတိယဆင့်
ကြုံတုန်း ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော့် အမေကလည်း မော်ကွန်းဝင် တတိယဆင့် ပါပဲဗျာ
နှစ်ယောက်စလုံး အရပ်ဘက်ကပဲပေါ့၊ တော်လှန်ရေးကာလက အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ
အန်ကယ်မျိုးအဖေအကြောင်း ကို စာတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဖတ်အပြီးမှာ ၊ ခင်မင်စွာဖြင့် အကြံပြုချင်တာကတော့
“ ကျွန်တော့်အဖေ(၁) ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးက တစ်မျိုးကြီးဘဲဗျာ ။ ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် “ ကျွန်တော့်အဖေ ဇါတ်ကြောင်း (၁) ” ဆိုသလိုမျိုး အကြံပြုခဲ့ပါတယ် ။
အန်ကယ်မျိုး ဘဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ
အကျိ ကတော့.. မြင်တတ်ပါ့
ရှားရှားပါးပါး …. တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး ကျန်သေးတဲ့မော်ကွန်းဝင်တွေကို
ယခုခေတ် အစိုးရမှ ထိုက်ထိုက်တန်တန် တစ်ခုခု ချီးမြှောက်သင့်ပါပြီ …။
ပြောသာပြောရ လက်ချိုးရေစရာတောင် ကျန်သေးရဲ့လား မသိ …။
မော်ကွန်းဝင်ဆိုတာ တကယ်ကို အကျိုး မမျှော်မှန်းပဲ အသက်စွန့် တိုက်ခဲ့ရတာပါ …။
ရိုးရိုးနေတဲ့သူတောင် ဒုက္ခပေးခံရတဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ခေတ်မှာ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို စာနာကြည့်ဖို့ ကောင်းပါတယ် …။
သေသာသေသွားရော အကျိုးမခံစားရဘူးဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာ….
လက်ချိုးရေစရာလောက်သာ ကျန်တော့တဲ့ တို့ဘိုး တို့ဘွား သူရဲကောင်းတွေ နေ၀င်ချိန်မှာ စိတ်ချမ်းသာနှိုင်ကြပါစေ …
နယ်က မွန်မွန်တို့ ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ မော်ကွန်ဝင်တတိယဆင့် ဘိုးဘိုးကြီး သက်ရှိထင်ရှား ကျန်းမာစွာရှိနေပါသည်။
အန်ကယ်မျိုးရေ.. ကြိုဆိုပါတယ် .. ဗိုက်ကလေးက ဘီးအီးနဲ့ ရီဝေေ၀ ဖြစ်သွားလို့ပါ ။ ဒီ ဆိုဒ်ထဲမှာ ဦးမျိုးဆိုပြီး ကားဈေးတွေ ရေးနေတဲ့ သူထင်သွားလို့ ကားသူဌေးလို့ ခေါ်လိုက်တာနေမှာ .. :grin:
ကျနော်က ကားဘောဇိ ဦးမျိုးနဲ့ မှားတွားတာ..
အန်ကယ်မျိုးလဲ မကြာခင် ကားတွေများကြီးပိုင်တဲ့ ကားဘောဇိ ဖြစ်ချေတော့မည် တမုံ့ 
အန်ကယ်မျိုးရေ ပြုံးလည်း လူသစ်ပါနော်။ အန်ကယ်မျိုးရဲ့ ဖေဖေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေ့များသွားလို့လား၊ နာမည် မပါဘူးနော်။ ဒီလိုလေ ပြုံးက ဆရာသော်တာဆွေ တို့ကို ကိုးကွယ်တဲ့လူဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားလို့ မေးကြည့်တာပါ။
ပြုံး ကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ် ..
ကျွန်တော့အဖေ ဆိုလို့ သူလိုငါလို ကိုယ့်ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းပဲ ထင်နေတာ။
အခုပိုစ့်မှာ အမြည်းလေး ဖတ်ရတာနဲ့တင် စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။
သော်တာဆွေတို့ သန်းဆွေတို့ နဲ့လည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် ပုလင်းတူ ဗူးဆို့ ပါပဲ။
ဆိုတော့ နည်းတဲ့ အဆင့်ကြီး မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ တစ်ချက်ထဲနဲ့ အန်ကယ်မျိုးရဲ့ အဖေအကြောင်းကို ဖတ်ဖို့ လုံလောက်နေပါပြီဗျာ။
အခုမှ ပထမဦးဆုံး စတင်တဲ့ အသစ် တစ်ယောက်ရဲ့ Post မှာ ၊
တစ်ရက် လောက်နှင့် Comment ၂၇ ခုရနေပြီ ဆိုတော့ ၊
စန်း ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ ။
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ Uncle Myo ရေ ။
Foreign Resident ။
အန်ကယ်မျိုးရေ….. ကြိုဆိုပါတယ်နော် ။
ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အပြင် ၊ အရည်ချင်း ရှိတဲ့ ဖခင်ကို အဖေတော်ခဲ့ရသူအဖြစ်နဲ့ပါ .. အန်ကယ်မျိုးရဲ့ ကံကောင်းခြင်းကို အသိမှတ်ပြု ၊ အားကျမိပါတယ် ။
နောက်ဆက်ရေးမယ့် အဖေအကြောင်းတွေလည်း … ဖတ်ခွင့်ရချင်ပါသေးတယ် …. ။
မဟောသဓ ဇာတ်တော်ထဲက ပညာရှိအမတ်တစ်ယောက်လို အခြင်အတွယ်နဲ့ထဲ့ထားတဲ့
စပါးကျည်ထဲကစပါးကို အချင်အတွယ်နဲ့ပြန်ထုပ်ပြီး ကုန်သွားတဲ့နောက်မှာဘာမှဆက်လုပ်
အမယ်မင်း—-ဖတ်၊မှတ်၊သိ၊ ခဲ့ပညာရှား—ရှား—ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်—
အဟား ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ အသစ်လို့ထင်နေတာ ….ကိုယ့်လိုပဲ ရွာထဲကိုအသစ်ရောက်လာတဲ့သူတွေရှိနေပါလား…..အန်ကယ်မျိုးကို ကြိုဆိုသလိုပဲ..သားသားကိုကြိုဆို ကြပါနော် …..အနော်လည်း……ရွာသားအသစ်ပါခင်ည……ဓါတ်ပုံ ပြပွဲကို စိတ်ဝင်စားလို့…ရွာထဲက ဓါတ်ပုံ ဆရာတွေအားကျလို့ပါနော်……ရွာသူရွာသားများအားလုံးကို ခင်မင်လျှက်……ရွာသားလေး ရွှေထီ…
သားသား ရွှေထီး ကို လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
အန်ကယ် မျိုးကြီး ကို လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
ရွာမှာ လူစည်လေ သူကြီးကြိုက်လေမို့ သူကြီးကိုယ်စား အခမဲ့ ပွဲစားလုပ်ပါတယ်။
အန်ကယ်မျိုး မိဘ များ အတွက် တကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်။
ပါတာဖခင်ကြီး ရဲ့ ပုံပြင် တွေကို ဆက်နားထောင်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ။ :-)
(မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် 1958 ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက အသဲကြားက မဲတစ်ပြားဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် သတင်းစာမှာရေးဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာ။)
အဲတော့…အဓိပ္ပါယ်က ကျုပ်ထက် အသက်မဆိုစလောက်ကြီးတဲ့သူတယောက် ရွာထဲရောက်လာတယ်ပေါ့…။
မန်းဂေဇက် အယ်ဒီတာဦးခိုင်လည်း ရွာသဂျီးဆိုဗဲ… လွတ်လပ်ရေး မော်ကွမ်းဝံ သုညအဆင့် ရခဲ့ဒယ်ဒဲ့…။ ဂျပန်ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်ပျံတွေ ဗုံးလာကြဲတဲ့ဂျားဂ စွမ်းစွမ်းတမံ ကွမ်းယာရောင်းခဲ့လို့ဒဲ့…
Uncle Myo ရေ..အခုမှ အပိုင်း (၁) ကို စဖတ်လိုက်ပါတယ်။ အခု ရုံးဆင်းတော့မှာမို့လို့ မနက်ဖြန်မှပဲ ဆက်လက်အားပေးပါမယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။